mercredi, 24 juin 2020 15:54
Asa fanaovan-gazety: Nodimandry androany teo amin’ny faha-54 taonany i Lôlot Ratsimba
Maloka ny asa fanaovan-gazety. Nodimandry ny marainan’ity alarobia 24 jona 2020 ity, i Ratsimba Nambinintsoa Solomon na Lôlot Ratsimba, anarana nahafantarana azy teo amin’ny sahan’ny asa fanaovan-gazety.
mardi, 23 juin 2020 09:54
Antenimierandoholona: Namoy ny ainy ny Loholona Razafindratovo Ravololonirina Émilie
Nodimandry omaly ny Senatera Razafindratovo Ravololonirina Émilie. Voafidy tao amin’ny Faritany Antsiranana, avy amin’ny antoko Leader Fanilo izy. Iray amin’ireo vehivavy senatera miisa 12 tao amin’ny Antenimierandoholona.
lundi, 22 juin 2020 18:50
Mahery Lanto Manandafy: Navotsotra taorian’ny telo andro nitazomana am-ponja azy
Nivoaka ny fonjan’Ambalatavoahangy Toamasina androany Alatsinainy 22 jona 2020 i Mahery Lanto Manandafy. Ny zoma 19 jona 2020 ity farany no notazomina am-ponja vonjimaika tao noho ny fitoriana nataon’i Dr Benessy Harison Sébastien, Senatera amperinasa sady Talen’ny OMSI (Organisation Médico-Sociale Interprofessionnelle) Toamasina, azy noho ny fanalam-baraka ampahibemaso nampiasana fitaovana informatika.
vendredi, 19 juin 2020 15:03
Mahery Lanto Manandafy: Tazomina am-ponja vonjimaika ao Ambalatavoahangy Toamasina
Voatana am-ponja ao Ambalatavoahangy Toamasina nanomboka ny fiandohan’ny tolakandron’ity zoma 19 jona 2020 ity i Mahery Lanto Manandafy ; zanaka lahin’ilay mpanao politika goavana sady filohan’antoko Manandafy Rakotonirina.
vendredi, 19 juin 2020 09:53
Air Madagascar - Jirama: Iza no naha faillite azy?
Teo ampahatongavana nitsena ireo fitaovana, anamboarana ozinina fanaovana fanafody, milanja 100tonnes avy any Allemagne sy Chine ny Filoha ny 18 jona 2020 no nanambara fa:
jeudi, 18 juin 2020 14:44
Fiangonana Jesosy Mamonjy: Nodimandry i Pasteur Ratafy Léon
Mpitandrina ny Foibe Fiangonana Jesosy Mamonjy – Ankorondrano Antananarivo i Pasteur Ratafy Léon, Filohan'ny Fiangonana Jesosy Mamonjy eran'i Madagasikara ihany koa.
jeudi, 11 juin 2020 20:27
Ambohimanambola – Antananarivo : Nitrangana haintrano tao amin’ny magasin Société Focus
Nitrangàna haintrano tao amin'ny magasin Société Focus teny Ambohimanambola, Distrika Antananarivo Avaradrano androany atoandron’ny alakamisy 11 Jona 2020. Ankoson'aratra no nihaingan'ny loza raha ny filazan'ny tompon'andraikitry ny orinasa.
mercredi, 10 juin 2020 13:18
Paositra Analakely: Basy mahery vaika tsara fono tao anaty gony hita tao anaty valindrihana
Mpiasa manao asa fanarenana ny trano fonenan’ny mpiasa ao amin’ny Paositra Malagasy etsy Analakely no nahatsikaritra ny fisian’ity gony jiafotsy nisy basy ity, omaly talata 9 jona 2020 tolakandro. Nampilaza tamin’ny lehibeny ireo mpiasa, ity farany indray no nampahafantatra ny zava-misy tamin’ny tompon'andraikitry ny asa eo anivon’ny Paositra Malagasy.
mardi, 09 juin 2020 14:43
Tetikasa « Tana Masoandro »: Afindra amina toerana hafa ny fanatanterahana azy
Nivoitra io omaly alatsinainy 8 jona nandritra ny fiatrehan’i Zasy Michael Angelo, Minisitra Lefitra misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana eo anivon’ny Minisiteran’ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ireo Loholon’i Madagasikara, tao amin’ny Lapa maitso Anosy. Nilaza izy fa « nafindra amina toerana hafa ny fanatanterahana izany, izay mbola eo andalam-pitadiavana izany toerana izany amin’izao fotoana izao ».
dimanche, 07 juin 2020 15:37
Be-Rija Ravelomanantsoa: Tazomina am-ponja eny Antanimora
Natolotra ny Fampanoavana tao amin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo ny sabotsy 6 jona 2020 i Be-Rija Ravelomanantsoa sy ireo olona efatra nosamborin'ny Sampana manenjika ny fandikan-dalàna amin'ny habaka (Cybercriminalité) ary notazomina teny amin’ny Sampana fikarohana momba ny heloka bevava eo anivon’ny zandarimariam-pirenena Fiadanana, nanomboka tamin’ny fiandohan’ity volana ity.
Page 6 sur 109